China Ca-Zn stabilizer ifektri abakhiqizi | JOYSUN
I-ejenti ye-PS ekhihlizayo
I-ejenti enegwebu le-PP
Umenzeli we-XPE ekhihliza amagwebu
1. Isiqiniseko seCa-Zn
Isiqinisi se-calcium-zinc sihlanganiswa nobuchwepheshe obukhethekile benkomponi, njengezinto eziyinhloko. Ingathatha indawo yokuqinisa okunobuthi okufana nomthofu, usawoti we-cadmium kanye ne-organotin, i-Practice ifakazele ukuthi kumikhiqizo ye-PVC resin, ukusebenza kokusebenza kuhle, ukuzinza okushisayo kufana nokuqina kasawoti oholayo,
njengeziqinisi eziningi zokushisa ze-pvc ezinobungani bemvelo, inenqubo enhle kakhulu yokusebenza. Ukuzinza okuhle okushisayo nekhono lesimo sezulu. Ukukhanya kwelanga okulwa nokuqina, i-anti-sulfide
ukungcola. Ngomhlophe wokuqala ongcono. Thuthukisa impahla yangaphandle yemikhiqizo. Ukuhambisana okuhle nokusabalalisa nge-PVC. Vimbela emvuleni. Isitebele sokwenza umumo. Phakamisa isivinini se-extrusion, yelula isikhathi sokukhiqiza.
Inzuzo ebaluleke kunazo zonke ye-CA / ZN stabilizer ayiyona into enobuthi kuwo wonke ama-pvc heat stabilizers.Futhi impahla yayo yezomnotho ezinhlelweni ezithambile / eziqinile.
Ukubonakala kwe-calcium ne-zinc stabilizers ikakhulukazi i-powder emhlophe, i-flake, ne-paste. Isiqinisi se-calcium-zinc esishubile sisetshenziswa njengesiqinisi se-PVC esisetshenziswa kakhulu esingeyona enobuthi, esivame ukusetshenziswa njengasezansi:
Ukupakisha kwe-1.Food, imishini yezokwelapha
Amaphrofayli we-3.PVC, amaphaneli odonga, amapayipi, izinto zokufaka neminye imikhiqizo ebunjiwe yomjovo
Ibhodi le-foam le-4PVC elimhlophe
Ibhodi le-foam le-5.PVC WPC
Tc. Idivayisi isetshenziswa kabanzi ezinhlotsheni ezahlukahlukene zamapayipi wokucubungula insimu, umkhakha wokwakha imikhumbi, isakhiwo senethiwekhi, insimbi, ubunjiniyela basolwandle, amapayipi kawoyela nezinye izimboni.
Olandelayo: ukucubungula izethulo zosizo
Ca Zn Isisimamisi